အဆိုပါ streaming များတက်သွား 12,99 $ ဒစ္စနေးရဲ့အရမ်းကောင်းသောကမ်းလှမ်းပေမယ့်ဒါဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် "သတ်ပစ်" မပါဘူး - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment "ဒီ streaming များတက်သွား 12,99 $ ဒစ္စနေးရဲ့အရမ်းကောင်းသောကမ်းလှမ်းပေမယ့်မထားဘူး" "သည်သူ၏ပြိုင်ဘက်ကိုသတ် - BGR
အဆိုပါ streaming များတက်သွား 12,99 $ ဒစ္စနေးရဲ့အရမ်းကောင်းသောကမ်းလှမ်းပေမယ့်ဒါဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် "သတ်ပစ်" မပါဘူး - BGR
ဒစ္စနေးကကြေညာခဲ့သည်လိုက်တဲ့အခါ ယင်း၏ streaming ဝန်ဆောင်မှု ကနိုဝင်ဘာလအတွက်ဖောက်သည်ရရှိနိုင်ပါသည်တစ်ချိန်ကတစ်လလျှင်သာ $ 5,99 ကုန်ကျမည်ဟုကဒစ္စနေး + ဟာရိုးရှင်းပြီးကြေးပေးသွင်းခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ သငျသညျပြီးသားအနည်းငယ်အမည်ကိုရန်, Netflix, HBO, Hulu, YouTube နဲ့အမေဇုံချုပ်အပါအဝင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများများအတွက်ပေးဆောင်ရင်တောင်ဒစ္စနေး + ဒီစျေးနှုန်းမှာသင့်ရဲ့လစဉ်ဖျော်ဖြေရေးဥပဒေကြမ်းတစ်ခုသိသိသာသာထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒစ္စနေး + အပေါငျးတို့သဒစ္စနေးဂုဏ်သတ္တိများကနေအရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာတစ်တန်ရှိသည်, အဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ပလက်ဖောင်းပေါ်ထွက်မလာမညျဖွစျကွောငျးအများအပြားမူရင်းရှိုးပွဲပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒစ္စနေး + ပြီးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အများအပြားစီးရီးနဲ့အတူ MCU အံ့ဩခြင်း၏နောက်အဓိကအဆင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် $ 5,99 များ၏လစဉ်ကြေးပေးသွင်းကြေးဒစ္စနေးပိုကောင်းဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည် အပို $7ကုန်ကျတဲ့ကြေးပေးသွင်း option ကိုထုတ်ဖော်ပြသ ဒါပေမယ့် Hulu နှင့် ESPN + သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါသည်။
သငျသညျပြီးသားကုန်ကျစရိတ်တစ်လလျှင် (ကြော်ငြာများနှင့်အတူ) 5,99 $ နှင့် 4,99 $ ဖြစ်ပြီး, Hulu နှင့် / သို့မဟုတ် ESPN + သို့စာရင်းသွင်းလြှငျ, အသီးသီး, သင်ပြီးသားရှိပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်လစဉ်အထုပ်အားလုံးကိုလက်လှမ်း 12,99 $ switching ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် ဝန်ဆောင်မှုစျေးနှုန်းအဘို့ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကိုကကတိပြုသည်။ ဒါဟာတစ်စုံကိုအလွယ်တကူတချို့ဖောက်သည်များအတွက်ဖျော်ဖြေရေး၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်နှင့်အခြားသူများ Netflix, HBO နှင့်တိုက်ရိုက် / streaming နဲ့အခြားအသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသူတို့၏ဆကျဆံရေးကိုစဉ်းစားစေနိုင်သည်။
သင်သည်များစွာသော streaming များစာရင်းပေးသွင်းထားမှုရှိပါကရှောက်သွား, သင်, သင်ဆဲဒစ္စနေး + လေးလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့မရပါဘူး။
အသစ်ဒစ္စနေး + အစုအဝေးကိုပြိုင်ဘက်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု ပို. ခက်ခဲစေမည်, သို့သော်အတိအကျပြိုင်ဘက်ပလက်ဖောင်း "သတ်ပစ်" မမထားဘူး။ ကောလာဟလများအရ, 17 ပတ်သက်. HBO မက်စ်ကြေးပေးသွင်းကုန်ကျစရိတ်ဒစ္စနေးနှင့်အတူမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်သဘောတူညီချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိပ်စျေးကြီးပုံပေါ်သောတစ်လဒေါ်လာ။ သို့သော် HBO အများအပြားသစ္စာစောင့်သိပရိတ်သတ်တွေရှိပြီးအသစ်ကဝန်ဆောင်မှု Now ကို HBO ထက် ပို. ပင်အကြောင်းအရာများကိုပါလိမ့်မယ်။
Apple ကသူ့ရဲ့ Apple ကတီဗီ + ၏ကုန်ကျစရိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပေ။ Apple ကဖြန့်ချိမှာမူရင်း programming ကိုတစ်ကန့်သတ်အရေအတွက်ကရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အိုင်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ Apple ကတီဗီ + ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြုသောပူဇော်သက္ကာအတွက်ပါဝင်သည်လျှင်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ န်ဆောင်မှုအပေါ်ကိုပိုမိုအလေးပေးချပြီးအသုံးပြုပုံ Apple က $ 12,99 ဒစ္စနေး၏စာချုပ်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်စေခြင်းငှါ, packages များအဘို့စဉ်းစားရန်များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ဒစ္စနေး + မသတ်နိုင်သော streaming ဝန်ဆောင်မှု၏ A ကောင်းဆုံးသာဓကအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ပါဝင်သောအမေဇုံချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ချုပ်ဗီဒီယိုမှာ။ အမေဇုံချုပ် subscription ကိုမကြာခဏဖောက်သည်ဖျော်ဖြေရေးအမျိုးမျိုးဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုန်ဆောင်မှုများတို့သည်ကြီးစွာသောအစုံပါပဲ။
အလားတူပင်သစ်ကိုဒစ္စနေး + အထုပ်လည်း YouTube ကိုသို့မဟုတ် Google TV ကိုအပါအဝင် cable ကိုခုတ်သဖြင့်ရှာသောအခါတိုက်ရိုက်တီဗီန်ဆောင်မှုကိုပိုမိုစျေးကြီးနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်အမည်ကိုမှလောက်လွှဲတီဗီ။
ဤကုမ္ပဏီများသည်အကြားယှဉ်ပြိုင်မှုမှကြွလာသောအခါ, Apple နှင့် Amazon ကစဉ်ဆက်မပြတ်၎င်းတို့၏ထုတ်လွှင့်ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ဒစ္စနေးဒစ္စနေး + subscriptions ကိုရောင်းပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ Apple ကသို့မဟုတ်အမေဇုံကိရိယာများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ဒစ္စနေး + packages များစာရင်းသွင်းနိုင်ဖြစ်ခြင်းမကြောက်ပါဘူး။
ကျနော်တို့လက်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောက်သည်များအတွက်ဤနေရာတွင်ရှိသည်သောသာသတင်းဆိုး။ ဒစ္စနေး + အချို့သောအချိန်များအတွက်သီးသန့်အမေရိကန်သဘောတူညီချက်ရလိမ့်မည်။ ဒစ္စနေးကအခြားနိုင်ငံများတွင် Disney နဲ့ Hulu + နှစ်ခုစလုံးတင်သွင်းဖို့လိုလားနေသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်အတူတကွဒီ version တစ်ခုထက်ပိုသောစျေးကွက်ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ESPN + သို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ access ကိုအားကစားဖြစ်ရပ်များများအတွက်ရှုပ်ထွေးလိုင်စင်သဘောတူညီချက်များပေးထားပိုပြီးပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒစ္စနေးနိုင်ငံတကာမှာက၎င်း၏ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမထားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီစင်ထင်ကြေးဖြစ်ပါတယ်။ Netflix နှင့် Amazon ကလည်းပိုပြီးအများအပြားစျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီးလက်ရှိထိုအနိုင်ငံများရှိဒစ္စနေး + မှမဆိုယှဉ်ပြိုင်မကွောကျပါလိမ့်မယ်။
ရုရှားကြည့်ရှု "Thrones ၏ဂိမ်း" အပါအဝင်အမေရိကန်ရှိုးပွဲကိုချစ် - BGR
ကို Nintendo ပြင်ဆင်မှုပြောင်းလဲမည်အတွက် ပို. ပင်သစ်ကိုမော်ဒယ်များရှိသည် - BGR